Sweet isoseji amabhisikidi ibhotela
amabhisikidi Sausage ne bhotela - kuyinto dessert esimnandi okungukuthi ijwayelekile eziningi kusukela eseyingane. Kufanele kuqashelwe ukuthi uju enjalo kuvela esihlwabusayo kakhulu futhi amnandi. Ngaphezu kwalokho, kuphela izingxenye eziyisisekelo kakhulu ekuwulungiseleleni ayadingeka.
Ngakho, indlela ukulungiselela isoseji amabhisikidi ibhotela? Namuhla sethula wena izindlela ezimbalwa. Ngumuphi kubo ukusebenzisa ngokwenza amaswidi izingane zabo - kuphuma kuwe.
Senza esiphundu chocolate amaswidi walnuts
Indlela yokwenza amnandi isoseji bhisikidi? Iresiphi, njengoba ebuntwaneni, abaningi abazi. Kule ndaba, sinqume cabanga ngale ndlela ethile ukupheka okukhona okuzenzela. Ngaye, sidinga:
Shortbread bhisikidi uhlobo "weJubili" - mayelana 300 g;
isihlabathi naphakathi ushukela - ½ inkomishi;
okusezingeni eliphezulu amafutha ibhotela - 250 g;
nokhokho oyimpuphu - 5 nezinkezo ezinkulu;
ushukela oluyimpuphu - esetshenziselwa umhlobiso;
walnuts - 4 nezinkezo ezinkulu.
Sausage amabhisikidi ibhotela okuphekiwe kalula kakhulu. Ukuze wenze uswidi esinjalo izingane zabo, kufanele kuqala ukulungiselela isisekelo. Ngakho, kubalulekile ukuba abeke shortbread esitsheni blender ugaye kube imvuthu esihle. Ngokulandelayo, endishini ahlukene edingekayo ukuze ancibilike lamafutha okupheka phezu ukushisa low, bese engeza ushukela naphakathi begodu uyilinde ukuqedela nokonakala. Phakathi naleso sikhathi, ungaya ukucutshungulwa namantongomane. Bona zidinga engahashazanga, omisiwe ngo-microwave oven kanye ganda endaweni chips ngokwanele ezinkulu (umane nquma ummese eyamukelekayo).
walnuts Okwenziwe, kufanele nje uthele le bhotela nge powder cocoa. Hlanganisa umkhiqizo, badinga ukubeka wonke amakhukhi. Ukuba iyunifomu ingcina mass, ungakwazi uqhubekele ukwakheka umkhiqizo.
Senza okukhona okuzenzela
kwakhiwa amabhisikidi Sausage ne bhotela, iresiphi zazo izincwadi esizifundayo, is kalula. Ukuze wenze lokhu, thatha epulasitikini, wayesesibeka zonke ngesisekelo ngaphambilini wayixova. Owenza mass obukhulu isoseji amnandi, awukudla okuzenzela kufanele uvalwe zihambisana futhi ozimele ku esiqandisini amahora ambalwa.
Kahle ukukhonza itiye
Uma isoseji Uqinisa amabhisikidi uwoyela, kungashiwo ngokuphepha asuswe ifilimu futhi isebangeni ipuleti flat. Vuvuzela powder umkhiqizo kashukela, kuyadingeka usike tincetu 2 cm ukushuba. Khonza eseqedile ushokoledi amalungu uswidi umndeni Kunconywa, kanye itiye ezingenashukela noma yimuphi omunye isiphuzo.
amabhisikidi Sausage: iresiphi ubisi olujiyile
Kunezindlela eziningana ukuze udale okukhona ekhaya ezinjalo. Ukuze ufunde ukuthi ungenza kanjani dessert zakudala noshukela nati, siyatshelwa. Uma uthanda nesoseji amnandi, kutuswa ukupheka kanye Ubisi olujiyile. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Shortbread bhisikidi uhlobo "weJubili" - 400 g;
shokolethe noma ezibabayo - tile ezinkulu;
okusezingeni eliphezulu amafutha ibhotela - 300 g;
olujiyile ubisi kuphekwe - Standard Bank;
candied - ukusetshenziswa ngokubona.
Njengoba kule iresiphi odlule, uqale ukulungisa okunjalo uswidi ukuba ne ukulungiswa imvuthu amnandi. Ngenxa yalesi esitolo edingekayo umkhiqizo gaya in a blender ngejubane eliphezulu kakhulu. Ngo ncamashi ngendlela efanayo okudingeka uyenze nesigaxa ushokoledi. Nokho, lisicole kakhulu hhayi ukuba, njengoba kuvela isoseji tastier okuningi, uma uzobe tincetu imikhiqizo enuka ungeze wazizwa.
Ilungiselela izithako eziyisisekelo ezidingekayo ukuqalisa kucutshungulwa uwoyela. Owendlala lamafutha okupheka endishini, kufanele kube kancane amanzi, kangangokuba hhayi wokushiswa. Ngemva Ukupholisa ubuso ibhotela kumelwe engeza kuphekwe Ubisi olujiyile, izithelo candied (uyazikhethela) futhi shortbread amabhisikidi, ochotshoziwe ku imvuthu. Kukhona futhi iyadingeka ukuze uthele futhi chocolate izicucu. Ekupheleni yonke imikhiqizo kumele elixutshwe kahle, usebenzisa ngesipuni enkulu.
Owenza okukhona okuzenzela
Ukuze wakhe owakho amnandi isoseji bhisikidi kufanele ibe kahle ngendlela efanayo njengoba kuchaziwe kule iresiphi odlule. Ukuze wenze lokhu, udinga ukubeka isisekelo wayixova e epulasitikini futhi Roll it kusukela ukuma side of isiyingi kwesigaba esiphambanweni. Ngokulandelayo, umkhiqizo osuphelile kumele ibekwe endaweni ucwecwe ukupheka bese uthumela efrijini imizuzu 20-32. Phakathi nalesi sikhathi isoseji Uqinisa futhi ziqhubeka wawunika yakha.
Kahle ukukhonza umkhiqizo amnandi etafuleni umndeni
Ngemva okukhona okuzenzela Ubisi olujiyile usulungile, kumelwe asuswe ukudla awubeka ifilimu ngoba ikhekhe. Fafaza oluyimpuphu noshukela amasosishi kuyadingeka uthathe izingxenye izicucu futhi amalungu akhona yekhaya kanye itiye eqinile futhi ezingenashukela asanda ukwenziwa.
Smoothies izindlela ezimbalwa futhi indlela yokwenza milkshake nge ice cream
Literacy umkhankaso: indlela ukupheka ukholifulawa phambi ukuthosa?
Yini ukupheka eyodla: Quince iresiphi kanye inyama
Kanye namaqebelengwane okuzenzela kungekho imikhiqizo yokudlela "Lac Pizza" akaqhathanisi!
Umlando imiphakathi eyimfihlo, kanye nezinyunyana oda
Ukushisa amanzi namapayipi okuthuthwa kwamanzi
Izinhlangano ezingokomthetho njengezikhonzi zoMbuso komthetho we-civil. isizinda nobuntu
11 izinyanga wengane: ukuthuthukiswa. Ukuthi izingane kufanele ukwazi ezinyangeni ezingu-11 - umbono uchwepheshe
Itiye Ginger isisindo ukulahleka: Izimo kanye nezeluleko
Imisindo yokukhansela i-headphones: ukukala nokubuyekezwa
Abadlali edume kakhulu emhlabeni kanye cinema Russian
Carnival lens - engavamile futhi emuhle
Dream Ukuhunyushwa: dream okuyinto Mandarin
"UMarku Avrely" (Izmailovo) imisebenzi, ukubuyekeza, izincazelo